ညီနေမင်း: Dreamweaver CS4 Light (portable)
Dreamweaver CS4 Build world-class websites and applications with one of the industry's leading web authoring tools. Adobe Dreamweaver CS4 software is ideal for web designers, web developers, and visual designers. (46 MB)
ဒီကောင်လေးက MB နဲနဲလေးနဲ့ဆိုတော့ အလုပ်ဖြစ်တယ်လေ . နေရာသိပ်မယူဘူး . အဆင်ပြေကြမယ် ထင်ပါတယ် .. အဆင်ပြေတုန်းလေး ဒေါင်းထားလိုက်ကြပါ . လင့်တွေလုံးဝမရဘူးဆိုရင်တောင် nyinaymin.net လင့်ကနေ Download လုပ်ပါ . မြန်မာပြည်ကလဲရပါတယ် . ကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင် hosting ကနေ တင်ထားပေးတာပါ .
Download rapidshare ၊ Download megaupload ၊ Download ifile.it ၊ Download mediafire ၊ Download 4shared ၊ Download nyinaymin.net
Posted by ညီနေမင်း at 7:19 PM
Mr.Zaw Min Aung August 2, 2009 at 1:32 PM
ဒီဆောဖ်ဝဲလေးကိုသူငယ်ချင်းတယောက်ကမေးနေတာကြာပါပြီ။ အဆင်သင့်စွာပဲ လွယ်ကူစွာဒေါင်းလိုက်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါပဲဗျာ။ ကျွန်တော်ကဒေါင်းသမားသက်သက်ပါ။ မိတ်ဖြစ်ဆွေဖြစ်
လင်းဝင်းသူ November 20, 2009 at 7:41 PM
ကိုညီနေမင်းရေ ဒီဆော့ဖ်ဝဲကို လိုက်ရှာရတာ တော်တော်ကြာသွားပြီ။ အခုတွေ့လို့ ဒေါင်းလုပ် ယူလိုက်ပါတယ်။ ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်။ အခုလို စေတနာတွေထားပြီး ကိုယ်ကျိုးမကြည့်ဘဲ လုပ်ဆောင်ပေးသူ ကိုညီနေမင်းကို ကောင်းမွန်တဲ့ စေတနာအကျိုးတွေ တန်ပြန် သက်ရောက်ပါစေဗျာ။